Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 5,587 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
13 Jumada al-awwal 1440 H
Taariikhdu Maata Waa 21 Jannaayo 2019 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Dhulka waa meereha saddexaa ee qoraxda u dhow ama Baho cadceedeed. Waa meeraha ugu mugga iyo miisaanka weyn iyo midka shanaad ee ugu xajmiga weyn sideedda meere eeBaho cadceedeed. Dhulka waxa lagu naaneeysaa Meeraha Midabka Buluugan sababtoo ah marka hawoda sare laga soo eego waxa muuqda midabka buluuga.
Dhulku waa meereha kaliya ee nolol ka jirto dhamaan meereyaasha aan naqaano, waxa lagu qiyaasaa meeraha dhulka in da'diisu ku dhowdahay 4.5 bilyan oo sanno.
Cirka ama Samoda sare ee dunidan aan ku nool nahay waxay ka sameeysan tahay 78.08% curiyeha nitrojiin (N2) taas oo ah hawo, 20.95% ogsajiin (O2), 0.93% argon, 0.039% Kaarboon-dhaya-ogsaadh (C2O) iyo qiyaastii 1% uumi biyo ah (in kastoo mararka qaar kala duwan tahay cimilodu).
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 5,587 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin